ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति | Rochak
September 22, 2021 NepstokLeaveaComment on ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो। मङ्गलवार मङ्गलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ। बिहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ। यी ग्रहहरूले तपाईँको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन्। त्यसैगरि कुनै पनि मानिसको जन्म महिनाको प्रभाव समेत उसको जीवनमा पर्ने गर्छ।
केटीएम दैनिक बाट
अब मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न पाइने, खुल्ला हुने निर्णयले स्थानिय खुसी
यस्ता छोरा जसले एक वर्ष सम्म आमाको शव जतनले घरमै लुकाएर पेन्सनको पैसा बुझ्दै गए
३ तला माथिबाट सोफा फ्याँके, तल सडकमा महिला थिइन्, सीसीटिभीमा भिडियो रेकर्ड
खुसीको खबर ! कतारमै रहेका र कतार जान चाहने नेपालीहरुको लागि !
दक्षिण भारतीय स्टारहरु बलिउडमा आउन डराउँनुकाे रहस्य यस्ताे